Daawo Sawirada Kulankii uu shalay shex dhexaadiyey Garsoore Cumar C.qaadir Cartan ee ka dhacday Nairobi | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Daawo Sawirada Kulankii uu shalay shex dhexaadiyey Garsoore Cumar C.qaadir Cartan ee ka dhacday Nairobi
(12-2-2018) Garsooraha da.da yar ee Cumar C.qaadir Cartan ayaa shalay qabtay Cayaar Xiiso badnayd oo ka dhacday Magaalada Nairobi ee Caasimada dalka Kenya waxaana ay u dhaxaysey kooxaha Leopards iyo SOM Fosa FC.
Kulankaan oo ahaa isreeb reebka koobka Africa Confederations Cup ayaa ku dhamaatay bareejo 1-1 ah waxaana ay ahayd Cayaar aad u adag iyada oo lug labaad la dheeli doono.
Kooda SOM Fosa FC ayaa ka dhisan dalka Madagascar.lugta labaad ee Cayaartaana waxaa lagu Cayaari doonaan dalkeeda iyada oo haysata Gool ay banaanka ku soo dhalisay.
Cayaartaan oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa waxaa dhex dhexaadinayey Garsoorayaal Soomaaliyeed waxaana Garsooraha dhexda uu ahaa Garsooraha da.da yar ee Cumar C.qaadir Cartan kaas oo aad loogu amaanay Cayaartiisii koowaad ee Caalami ah ee uu qabto.
Garsooraha ayaa bixiyey hal Jaale oo kaliya 90 kii daqiiqo ee Cayaarta loogu tala galay waxaana aad loogu maanay qaabkii dhe dhexaadnimada lahayd ee uu kulankaan u qabtay waxaana ay u ahayd kulankiisii koowaad ee Calaami ah ee uu qabto,